आगलागीको समय, सजक पनि सर्तक पनि ! - falaichanews
आगलागीको समय, सजक पनि सर्तक पनि !
इटहरी । हिजो बिहान इटहरीको तिरुपति प्लाई उद्योगमा लागेको आगो आज विहानमात्र नियन्त्रणमा आयो । आगलागी पूर्वका विभिन्न स्थानका १५ वटा दमकलले आज विहान नियन्त्रणमा लिएको हो ।
उद्योगमा मेसिन चलाउदा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरीका डिएसपी अर्जुन केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षतिको विबरण यकिन आएको छैन् । प्लाई उद्योग भएकोले उद्योगको भित्री भागमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न निकै समस्या भएको थियो ।
यता इटहरी–धरानबीचको चारकोसे जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छैन । ४ दिन अगाडिदेखि लागेको डढेलो १ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो लाग्न सुरु भएकै दिनदेखि नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको जनाइएको छ ।
प्रीमनसुनको यो समय सुख्खा हुने भएकाले आगलागिको जोखिम बढी हुने गर्दछ । यो समाचार तयार पार्दासम्म मुलुकभर ५३ जिल्लाका विभिन्न वनमा गरेर ३ सय १५ ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत वन डढेलो पहिचान प्रणालीका अनुसार आगलागी नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मी र वारुण यन्त्रको प्रयोग गरिने गरिएको छ । मानिसहरूले चुरोट खाएर फाल्ने, वनभोजमा गएकाले आगो छोडेका तथा नयाँ रूख पलाउने आशामा आगलागी गराउने गरेका छन् ।
विज्ञहरुले भने आगलागिबाट जन तथा धनको ठुलो क्षति हुने भएकाले नागरिक समाज पनि सजक र सर्तक रहन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रमा लागेको आगो /तस्विर फाइल